Ndị na-eweta Nitrogen Generation & Factory - Ndị na-emepụta Nitrogen China
Ngwaahịa ndị na-eje ozi mkpa ahụike nke ndị mmadụ. Dị ka WHO si kwuo, ngwaahịa ndị a kwesịrị ịdị "mgbe niile, n'ụzọ zuru oke, n'ụdị usoro onunu ogwu kwesịrị ekwesị, nwere ezigbo mma na ozi zuru oke, yana ọnụ ahịa onye ọ bụla na obodo nwere ike imeli".
PSA ahaziri ahazi
Ihe ndina carbon
Ịdị ọcha Hydrogenation...
Rubber Taya PSA Nitrogen Ge...
Na-ahazi nri PSA Nitroge...
Ụkpụrụ PSA Technology
Nkà na ụzụ PSA bụ usoro maka ime ka ngwakọta gas dị ọcha. Dabere na mgbasa ozi anụ ahụ nke ụmụ irighiri gas na adsorbent, usoro a bụ mgbanwe na-arụ ọrụ n'etiti steeti nrụgide abụọ.
Dị ka ụkpụrụ si dị na ihe ndị na-adịghị ọcha nke ngwakọta gas nwere nnukwu ikike mgbasa ozi n'okpuru nrụgide dị elu na obere ikike mgbasa ozi n'okpuru nrụgide dị ala. Karịsịa, hydrogen nwere obere ikike mgbasa ozi ma ọ dị elu ma ọ bụ obere nrụgide. Iji nweta ịdị ọcha nke ngwaahịa dị elu, enwere ike ịbawanye nrụgide akụkụ na-adịghị ọcha na-adsorb dị ka o kwere mee n'okpuru nrụgide dị elu.Desorption ma ọ bụ mmeghari nke adsorbent n'okpuru nrụgide dị ala, enwere ike ịkwado ihe ndị na-adịghị ọcha ọzọ na okirikiri ọzọ site na ibelata ego fọdụrụnụ. nke adịghị ọcha na adsorbent.
Osisi Nitrogen Generator PSA na-ahazi nri
Okwu mmalite nke PSA Technology
Teknụzụ PSA bụ ụdị mgbasa ozi gas ọhụrụ na teknụzụ nkewa. Ọ dọtara uche na asọmpi na ụlọ ọrụ ụwa maka mmepe na nyocha mgbe ọ pụtara.
Teknụzụ PSA ejiri mee mmepụta ụlọ ọrụ na 1960s. Na 1980s, teknụzụ PSA nwetara ọganihu na ngwa mmepụta ihe ka ọ bụrụ mgbasa ozi gas kachasị ewu ewu na teknụzụ nkewa n'ụwa ugbu a.
A na-eji teknụzụ PSA eme ihe na nkewa oxygen & nitrogen, ihicha ikuku, ịdị ọcha ikuku na ịdị ọcha hydrogen. N'ime ha, ikuku oxygen & nitrogen nkewa bụ inweta nitrogen ma ọ bụ oxygen site na nchikota nke carbon molecular sieve na nrụgide swing adsorption.
Carbon ebugoro dị ọcha na Nitrogen
Ụkpụrụ nke ịdị ọcha nke Carbon na-ebu
Enwere ike iji nchacha nke carbon ebu maka usoro nwere mmetụta hydrogen ma ọ bụ nwee nsogbu na isi iyi hydrogen gas. Nri nitrogen dị ụkọ na-emeghachi omume na oke carbon na oke okpomọkụ iji mepụta CO2. Enwere ike nweta nitrogen dị ọcha dị elu mgbe ị gafesịrị ụlọ elu adsorption nke ogige oxygen decarburized.
Hydrogenation ọcha na Nitrogen
Ụkpụrụ nke ịdị ọcha Hydrogenation
A ga-emepụta nitrogen raw nitrogen site na PSA ma ọ bụ nkewa akpụkpọ anụ, ma gwakọta ya na obere hydrogen. Oxygen fọdụrụnụ na-emeghachi omume na hydrogen iji mepụta ikuku mmiri n'ime reactor jupụtara na metal palladium catalyst, ya mere, ọtụtụ n'ime ikuku mmiri na-ejupụta site na igwe oyi gachara, a na-ewepụkwa mmiri condensed site na nkewa mmiri dị elu. Mgbe akpịrị ịkpọ nkụ miri emi na iwepụ uzuzu na igwe nkụ, a na-enweta nitrogen dị ọcha dị elu n'ikpeazụ.
Site n'ụzọ, The adsorption draya nwere ike ime ka igirigi nke ngwaahịa gas n'okpuru - 70 ℃. Onye nyocha na-enyocha ịdị ọcha nke gas ngwaahịa n'ịntanetị.
Nitrogen Generator nkewa Membrane
Okwu Mmalite nke Nitrogen Generator nkewa Membrane
Nitrogen Generator nke Membrane na-eji teknụzụ ọhụrụ nwere akpụkpọ ahụ nkewa dị ka isi ikewapụ, itinye uche na sachaa ihe. Akpụkpọ ahụ nkewa bụ akpụkpọ ahụ nwere usoro morphological dị iche iche, nke sitere na polymers organic nke nkewa pụrụ iche na ihe inorganic.
N'ihi ọnụego dị iche iche nke mbanye site na akpụkpọ ahụ, ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ ihe mejupụtara ọtụtụ ihe nwere ike ikewa ma ọ bụ mee ka ọ baa ọgaranya n'okpuru ụfọdụ ike ịkwọ ụgbọala.
Osisi Na-emepụta Nitrogen PSA Chemical
Njirimara PSA Nitrogen Generator Plant
1.In na abịakọrọ ikuku usoro, ọnọdụ nke na-arụ ọrụ carbon adsorber na ikuku nchekwa tank na-atụle n'ụzọ zuru ezu, ya mere, ọ na-eme ka ọkọnọ nke nrụgide ike gas isi iyi maka PSA nitrogen generator osisi na ogologo ọrụ ndụ nke carbon arụ ọrụ. A na-ewepụta ikuku ikuku sitere na okike, enwere ike imepụta nitrogen naanị site n'inye ikuku na ọkụ ọkụ.
2.The nitrogen usoro tank nke PSA nitrogen generator nwere ike ime ka outlet mgbali nke nkịtị nitrogen ọzọ kwụsie ike, na nitrogen ịdị ọcha na-emetụta naanị nitrogen iyuzucha olu dị mfe ịgbanwe. A na-edozi ịdị ọcha nke nitrogen nkịtị n'ụzọ aka ike n'etiti 95% - 99.99%. Enwere ike idozi nitrogen dị ọcha n'ụzọ akaghị aka n'etiti 99% - 99.999%.
Osisi Na-emepụta ọgwụ PSA Nitrogen Na-emepụta Osisi
Ụkpụrụ PSA Nitrogen Generator Plant
Ihe ndị bụ isi bụ nitrogen na oxygen na ikuku. Họrọ adsorbents dị iche iche adsorption selectivity maka nitrogen na oxygen na chepụta kwesịrị ekwesị usoro iji mepụta nitrogen site iche iche nitrogen na oxygen.
Ma nitrogen na oxygen nwere oge anọ, na oge anọ nke nitrogen dị ukwuu karịa oxygen. Ya mere, ike adsorption nke oxygen na carbon molecular sieve dị ike karịa nitrogen na ụfọdụ nrụgide (ike dị ike n'etiti oxygen na elu ions nke molecular sieve).
Igwe na-emepụta Nitrogen PSA eletrọnịkị
Mmalite nke Osisi Nitrogen Generator PSA
PSA Nitrogen Generator Plant bụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị elu maka nkewa ikuku. Ọ na-eji ikuku mkpakọ dị ka akụrụngwa na carbon molecular sieve dị ka adsorbent na-emepụta nitrogen site nrụgide swing adsorption usoro.
N'okpuru ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide nkịtị, dị ka ọdịiche nke ikike adsorption n'elu carbon molecular sieve na ọdịiche nke ọnụego mgbasa ozi na carbon molecular sieve dị iche n'etiti oxygen na nitrogen, ọ nwere ike nweta usoro nke mgbasa ozi na-arụ ọrụ na ikuku desorption. iji mechaa nkewa nke oxygen na nitrogen ma nweta nitrogen dị ọcha achọrọ site na njikwa mmemme iji chịkwaa valvụ pneumatic.
Site n'ụzọ, ịdị ọcha na mmepụta gas nke nitrogen nwere ike gbanwee gbasoro ihe ndị ahịa chọrọ.
Rubber Taya PSA Nitrogen Na-emepụta Osisi
Usoro PSA Nitrogen Generator Plant
Ihe ndina adsorption nke PSA nitrogen generator plant ga-enwerịrị opekata mpe ụzọ abụọ: mgbasa ozi (na nrụgide dị elu) na desorption (na nrụgide dị ala) na-arụ ọrụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na enwere naanị otu akwa adsorption, mmepụta nitrogen na-adịte aka. Iji na-enweta ngwaahịa nitrogen na-aga n'ihu, a na-edobe akwa abụọ adsorption n'ime ụlọ ọrụ ikuku nitrogen, a na-edozikwa usoro enyemaka dị mkpa dị ka nhazi nrụgide na ikuku nitrogen iji chekwaa ike, belata oriri ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ihe ndina mgbasa ozi ọ bụla na-aga n'ihu na usoro nke adsorption, ntọhapụ nrụgide na-aga n'ihu, mweghachi, ịgbagharị, ngbanwe, nhazi nrụgide na ịrị elu nrụgide, a na-emegharị ọrụ ahụ kwa oge.
Ọgbọ ike hydrogen, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen, Atlas Copco Ngp, Hydrogen na Oxygen Generator, Psa Nitrogen osisi,